Igodo Logitech-ka-aga, kiiboodu ikuku iji kporo gị ebe ọ bụla | Gam akporosis
Otu n'ime nhọrọ ndị kachasị amasị iji wepụta uru nke mbadamba ụyọkọ bụ itinye ekwentị na keyboard. Ma ọ bụrụ na enwere onye nrụpụta nke na - achị ahịa a n'ihi ahụmịhe ya, ọ bụ Logitech. Na-achọ ezigbo keyboard maka ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba gị? Ọfọn adịghị uche a nyocha nke Igodo Logitech-Iji-Gaa, keyboard na-enweghị eriri nke na-apụta ìhè ma na-eguzogide uzuzu na mmiri.
1 Igodo Logitech-To-Go, kiiboodu ikuku iji kuru gị ebe ọ bụla
2 Ahụmịhe igodo Logitech-To-Go
2.1 Igodo osisi Logitech-To-Go
4 Isi ihe na ihu ọma
5 Ihe megide
Anyị ga-amalite site na ikwu maka nhazi keyboard. Na nke nke 24.2 cm ogologo, 13.7 cm elu na naanị 6 mm oké, Igodo Logitech-To-Go bụ ngwaọrụ dị mma ma dị mma, dị mma iji were ebe ọ bụla. Na mgbakwunye, ịdị arọ ya, gram 180, na-enyere aka nke ukwuu. Logitech chọrọ inye ụdị dị iche iche na oji, ọbara ọbara na cyan. Ọ bụrụ na ị na-achọ kiiboodu nke nwere agba dị jụụ ma mara mma, ọbara ọbara na cyan bụ nhọrọ kacha mma. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ profaịlụ ọkachamara karịa, igodo ojii ahụ dị mma na tebụl ọ bụla.
Ahụigodo ahụ dị ọcha, naanị njikọ dị na ya dị n'akụkụ aka nri nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụkwa njikọ USB micro iji kwado keyboard ahụ, na mgbakwunye na bọtịnụ on / off. Otu n'ime ihe ngosipụta bụ mkpa nke Logitech Keys-To-Go. Igodo ahụ enweghị ike ibili n'elu elu na-ekwe ka ọkpụrụkpụ 6mm ahụ masịrị m nke ukwuu. Na mgbakwunye, igodo Logitech niile igodo-Iji-Go na-egosi a Ihe mkpuchi FabricSkin Mmiri mmiri, nke na-enyere aka ichebe ya pụọ ​​na splashes na unyi ka ọ dị mfe ihicha site ihichapụ ya.
Ahụmịhe igodo Logitech-To-Go
Igodo-to-Go nwere teknụzụ nke na-enye ohere ide ederede nke ọma maka oghere dị n'etiti akwụkwọ ozi ya n'agbanyeghị na ọ dị mma nke ukwuu. Logitech etinyela usoro igodo ụzọ maka Windows na gam akporo, otu esi enyere multitasking aka ma ọ bụ were nseta ihuenyo, nke na-agbakwunye nrụpụta ọrụ na ịdị mma na ahụmịhe onye ọrụ.
Na mbu o siri ike iji akụkụ ya mara ya, mana mgbe ihe dịka 10 nkeji nke ojiji, ihe mmetụta ahụ adịla mma. Aka nke igodo bụ ihe obi ụtọ na ya n'ibu usoro na-eme ka dee nnọọ mfe. Ozugbo ịmalitechara gị i nwere ike dee na ezigbo ijeụkwụ na-enweghị nsogbu. N'elu ala dị larịị ngwaọrụ na-arụ ọrụ zuru oke, ọ bụ ezie na ịnwale iji kiiboodu n'apata ụkwụ gị ihe mmetụta ahụ adịchaghị mma ọ naghị enye nkwụsi ike
Otu uru nke ịbụ ndị ọrụ gam akporo ma ọ bụ Windows Phone bụ na ụdị nke Logitech wireless keyboard maka ngwaọrụ ndị a gụnyere nkwado na-enye anyị ohere itinye ma ekwentị ma mbadamba, na-eme ka ederede dị mfe. Agbalịrị m ya na mbadamba nkume nke ruru 700 gram na keyboard ka kwụsiri ike, n'ihi ya ị gaghị enwe nsogbu mgbe ị na-etinye ngwaọrụ ọ bụla. N'ikpeazụ mara na Igodo Logitech-To-Go nwere ndụ batrị nke ọnwa 3, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla na batrị ya.
Un wireless keyboard maka gam akporo ma obu Windows Phone zuru oke nke hapụrụ m nnukwu mmetụta. N’iburu n'uche nguzogide ya na unyi na splashes, ihe mara mma mara mma na ị nwere ike ịchọta ya Onyinye Amazon nyere ihe na-erughị euro 60 site na ịpị ebe aỌ bụrụ na ị na-achọ eriri igwe ikuku adịghị ọnụ ma na-adịgide adịgide, Logitech Keys-To-Go bụ nhọrọ dị mma ịtụle.
Igodo osisi Logitech-To-Go
kiiboodu di mfe ma dikwa nfe
Gụnyere nkwụnye iji tinye mbadamba nkume ma ọ bụ ekwentị ahụ
Batrị ahụ nwere obodo kwụụrụ onwe ya ihe dịka ọnwa 3, agaghị emerili ya
Ihe mkpuchi ya nke FabricSkin na-echebe kiiboodu megide ntanye
na ikpere ị gaghị arụ ọrụ nke ọma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Igodo Logitech-to-go, kiiboodu ikuku iji kuru gị ebe ọ bụla
[APK] WhatsApp na-esote na Telegram site na ịba ụba otu ndị mmadụ na 256
Anyị na-akpọrọ Cubot S600 kpamkpam n'etiti ndị ọrụ gam akporosis na ndị na-eso ụzọ